भान्सामा केतली एक परम्परागत र दैनिक कुरा हो। हामी पहिल्यै यसका आदी छौं कि हामी मात्र यसको महत्त्वलाई ध्यान नदिन्छौँ। यद्यपि, सबै कुरा परिवर्तन गर्दा ब्रेक हुन्छ। र त्यसपछि प्रश्न उत्पन्न हुन्छ: कसरी नयाँ छनौट गर्ने, कुन मोडेल र निर्माता।
हाल, पसलहरूको एक धेरै ठूलो चयन छ, त्यसैले कहिलेकाँही सही विकल्प खोज्न गाह्रो छ। यो ट्रेडमार्क पोलारिसमा ध्यान दिन सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूका उत्पादनहरू विविध विविध हुन्छन् र उपभोक्ताहरूको विस्तृत दायरालाई पूरा गर्न सक्दछन्।
प्लास्टिक टिभी: बजेट विकल्प
पोलारिस प्लास्टिकको टोपोटले मूल्य र गुणस्तरलाई राम्ररी जोड्दछ। यस अवस्थामा, यसको शरीर एक विशेष बहुलक सामग्री हो। तथापि, जब खरिद गर्दा, यो गुणस्तर अनुकूलन हो कि सामाग्री सुनिश्चित गर्नको लागि गुणवत्ता प्रमाणपत्र जाँच गर्न आवश्यक छ। यसको फायदामा कम वजन, सजिलो रखरखाव समावेश छ, र जबरजस्ती जलाइ रोक्न को लागी उबलते हुँदा यो मामला अति नै होईन।
स्टेनलेस स्टील teapots
धातु एक बलियो पर्याप्त र विश्वसनीय सामग्री हो। पोलारिस स्टेनलेस स्टील केतली टिकाऊ छ, लगभग खरोंच-मुक्त। यस्ता प्रकारका मोडेलहरूको तुलनामा सबैभन्दा गुणात्मक मानिन्छ। यद्यपि, तिनीहरूसँग एक महत्त्वपूर्ण ख्याति छ: उबलिएको बेला केस निकै तातो हुन्छ। तर निर्माताहरूले यो सञ्चालनलाई सम्भव रूपमा सुरक्षित बनाउन प्रयास गर्यो। यसैले, जलाउनदेखि बचाउन, ढक्कनको डिजाइन र केतलीको संभाला प्लास्टिक प्रयोग गर्दछ, जुन थर्मल चालकको कम स्तर छ।
जहाँसम्म डिजाइन सम्बन्धी छ, मानक समाधानहरू यहाँ प्रयोग गरिन्छ। तपाईं मोडेल को PWK 1718CAL को उदाहरण मा देख्न सक्नुहुन्छ।
सिरेमिक टीप पोलारिस क्लासिक्स प्रेमीहरूको अपील गर्नेछन्। सामान्यतया, यी मोडेलहरू रेट्रो शैलीमा बनाइन्छ र प्राय: ढाँचाहरूसँग सजाय गरिन्छ। तथापि, यो सिरेमिक ट्यापोटको केही कमजोरीको बारेमा प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिन सार्थक छ। सबैभन्दा पहिला, यस्ता मोडेलहरूमा आवरण पुरा तरिकाले हटाउन सकिने छ र भरने को लागी कुनै स्तर छैन। यसको अतिरिक्त, सिरेमिक सूचीबद्ध सामाग्री को सबै भन्दा ठूलो हो। यस केतलीको वजन गाह्रो छ।
गिलास छेउ पोलारिसको मूल डिजाइन छ। यस्ता मोडेलहरूले कम्युनिज्मका प्रशंसकहरूलाई उपयुक्त बनाउनेछन्। तिनीहरू आधुनिक आन्तरिक मा राम्रो देखिन्छन। उदाहरणको लागि, PWK 1714CGLD एक ग्लास फ्लास्क सुरुङ सुरुङ प्लास्टिक समाप्त संग। प्राविधिक विशेषताहरू एकदम राम्रो छन्: छिटो उबलने गति, सुविधाजनक नियन्त्रण कक्ष। तथापि, यो ध्यान दिन योग्य छ कि असीम सफाई मा यस्तो पोलिसिस केतली (गिलास) राख्नु एकदम गाह्रो छ। यो व्याख्या गर्न धेरै सजिलो छ: कांचको सतहमा प्रतिलिपि छाप्न सङ्कलन गर्दछ। साथै, कमजोरी मध्ये एक छैटौं स्प्याटबाट असामान्य पानी खान्छन्। गलत हैंडलिंगको स्थितिमा, यसले जलाउन सक्छ।
तर त्यस्ता मोडलहरूमा पनि फाइदाहरू छन्। एक गिलास केतलीमा, तपाइँ तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ कि फ्लास्कमा कति पानी छ, र यदि तपाई चाहानुहुन्छ भने, तपाईं नेत्रहीन रूपमा उबलने प्रक्रिया देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोडेल विशेष गरी सुन्दर हुन्छ जब मोडेल ब्याकलाइट संग सुसज्जित छ।
डिजाइन र विशिष्टताहरू
एक लामो समयको लागि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्न अर्थ छैन। केतलको आकार र रंग सेतो देखि कालो, सबै भन्दा बढी स्वादको स्वादमा फरक हुन सक्छ। यो उल्लेखनीय छ कि मेटल मोडेलहरू केवल सिलोरी रंगहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ। प्लास्टिक प्राय: सेतो, बेईजस्ता नीलो हो। तर सिरेमिक टिपोट पोलारिस (मोडेल PWK 1282 सीसीडी, पीडब्ल्यूके -1391 सीसीसी, PWK 1731CC, आदि) सधैं सुन्दर रूपमा चित्रित हुन्छन्। यसको लागि उद्देश्य धेरै फरक छन्:
पक्षी र सामान।
पहिले देखि नै खुला सर्पलको साथमा मोडेल भेट्न सम्भव थियो। अब, त्यहाँ धेरै थोरै व्यक्तिहरू छन्, र केवल ती व्यक्तिहरू जसले प्राचीन वस्तुहरू मन पराउन सक्छन् उनीहरूलाई किन्नको लागि सल्लाह दिन सक्छन्। आधुनिक मोडेल एक बन्द ताप ताप तत्वको साथ आउँछ, उनीसँग एक फ्ल्याट तल छ। यो यो न्यूनसन हो जुन स्केललाई छिटो हटाउने सुविधा दिन्छ। यस्ता केटिले, सम्पर्क तत्त्व केन्द्रमा स्थित छ, त्यसैले तपाइँ यन्त्रलाई "साइडमा" आधारमा राख्न सक्नुहुन्छ। लगभग सबै खण्डमा कोर्ड राख्नुको लागि कम्पार्टमेन्ट छ, तर अधिकांशलाई यसको आवश्यकता पर्ने सम्भावना छैन, किनभने केबल लम्बाइ धेरै नै 1 मीटर भन्दा बढी छ।
इलेक्ट्रिक teapot Polaris, कुनै पनि अन्य जस्तै, उबलते पानीको लागि डिजाइन गरिएको छ। तथापि, सबै मोडेलहरू यो प्रक्रियामा एकै पटक बिताउँदैनन्। यो प्यारामिटर प्रत्यक्ष रूपमा यन्त्रको शक्तिमा निर्भर गर्दछ। मोडेलमा निर्भर गर्दछ, यो 650-3100 वाटहरू बीच फरक हुन सक्छ। तर उच्च शक्ति सधैँ घरेलू उपकरणको लागि उत्तम विकल्प छैन। उदाहरणका लागि, यदि एक अपार्टमेन्ट वा घरमा पुरानो तारिख हो, र त्यहाँ यातायातको साथ समस्या हुन सक्छ, यो अधिकतम2किलोवाट सम्म अधिकतम ट्यापोटहरू विचार गर्न सार्थक छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड फ्लास्कको भोल्युम हो। क्याफेले छनौट गर्नुपर्दछ, तपाईलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको संख्यामा खाता लिनु पर्दछ। सबैभन्दा इष्टतम मात्रा 1.7-2 लिटर छ। यो घर र अफिसको लागि उपयुक्त छ। यद्यपि, निर्माताहरू र त्यस्तो केतलीहरू प्रस्ताव गर्छन्, जुन क्षमता6लिटर पुग्छ। प्रायः तिनीहरू ठूला ठूला समूहहरूमा वा अवस्थाहरूमा प्रयोग गरिन्छ जसमा बिजुली छैन जहाँ ठाउँहरूमा जाने आवश्यक छ।
शौकियाको लागि टिपोट
जो लोग अक्सर यात्रा गर्छन को लागि, सडक teapots को एक अलग वर्ग छ। तिनीहरू 2-3 सर्भरका लागि डिजाइन गरिएका छन् र प्रायः चम्मच वा चश्मेहरूसँग पूरा हुन्छन्। यस्तो पोलारिस क्याफे अतिरिक्त कार्यक्षमता संग सुसज्जित छ। यो मोडेल नियन्त्रण कक्षको उपस्थितिले जान्न सजिलो छ। र त्यहाँ छन् जो प्रदर्शन पनि स्थापित छन्। त्यस्ता यन्त्रहरूले पानीलाई निर्दिष्ट तापमानमा ल्याउन र निश्चित समयको लागि राख्न सक्दछ। साथै, त्यहाँ मोडेलहरू छन् जुन आईओएस वा एन्ड्रोइड प्रणालीहरू मार्फत WI-FI प्रयोग गरी व्यवस्थित छन्।
तपाईंलाई थाहा छ, सबै प्रकारका चियाहरू उबलिएको पानीसँग भरिन्छन। उदाहरणका लागि, सेतो चाइनाको तापमान 60 डिग्री सेल्सियस र हरियो एक - 80 डिग्री सी। यो यस्तो केतली हो जसले तपाईंलाई ठीकसँग सबै सर्तहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। यो देखिन्छ कि वास्तविक connoisseurs को लागि सर्वश्रेष्ठ विकल्प भेटिएन, तर यो पनि सीमा छैन। निर्मित भित्तासँग टीपोटहरू छन्। धानिएको पानी, चिया पातहरू लगाईयो र बटन थिच्नुहोस्, बाँकीको - स्वचालन पछि।
हाइब्रिड टीपोट र थर्मोस
Polaris teapot एक धेरै रोचक मोडेल हो। यसको सहयोगले तपाईं न केवल पानी फोडा गर्न सक्दछ तर यसको तापमान पनि स्थिर राख्न सक्दछ। यो कम पावर खपतको साथ आवंटित गरिएको छ, यसको नियम अधिकृत छैन, 1 केजीवाटको रूपमा, र ट्यांकको मात्रा6लिटर सम्म पुग्न सक्छ। सबै थर्मल पोष्टहरूसँग दुई वा तीन इन्टरनेसन मोडहरू छन् र दुईवटा अतिरिक्त कार्यहरू छन्, उदाहरणको लागि, विलम्ब सुरु। टीआपले एक कपडा यन्त्र हो, पानीको प्यालामा राख्नु, यसलाई लिफ्ट गर्न आवश्यक छैन, किनकि यो तीन प्रकारका बोतलहरूसँग सुसज्जित छ:
सञ्जालमा जडित स्वचालित र सिधा मात्र कार्य;
पंप - बिना शक्ति पनि, अझै यसलाई मेकेनिकल भनिन्छ।
केतली फोडा पछि, पानीको तापमान4घण्टासम्म रहन्छ, चाहे चाहे मुख्य हो वा होइन। यस्तो मोडेलको फ्लास्क स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको छ, जसले परिचालन अवधिमा बढ्दो वृद्धि गर्दछ। स्वत: बन्द प्रकार्य यस्तो मोडेलमा धेरै मांग छ, किनकि यसले यी उपकरणहरूमा नियन्त्रणलाई कम गर्न अनुमति दिन्छ।
अब पसलहरूमा तपाईं विभिन्न पोलारिस किन्न सक्नुहुन्छ कि। यो उत्पादनमा ग्राहक प्रतिक्रिया विभाजित छ। नियमको रूपमा, धेरै सकारात्मक व्यक्ति स्टेनलेस स्टील बिजुली केटल्सको बारेमा छन् । तिनीहरू व्यावहारिक र टिकाऊ छन्। तर गिलास र सिरेमिकले राम्रो पक्षको साथ साबित गरेन। दुर्भाग्यवश, धेरै मोडलहरू भरिएका हुन्छन्, जुन दुई वर्ष पछि बेवास्ता हुन सक्छ। तिनीहरूको सामान्य समस्या दरारहरूको उपस्थिति हो। तथापि, यो ध्यान दिनु पर्छ कि त्यहाँ पनि5बर्ष भन्दा बढीका लागि निर्दोष रूपमा काम गरिरहेका छन्। यस कम्पनीको प्लास्टिक क्याटलहरूका लागि, तिनीहरू अन्य मोडेलहरू तुलनामा सस्तो हो। त्यसोभए, हामी भन्न सक्छौं कि उनीहरूको गुण मूल्यको साथ निरन्तर छ।
"भित्र" बिजुली केतली
एक पोलारिस छेपारो कसरी छुट्याउने? यो प्रश्न धेरै मानिसहरूको लागि रोचक छ। एक नियमको रूपमा, सबै विद्युत क्याटलहरू को व्यवस्था लगभग एकै छ। भिन्नता केवल केहि मोडेलको विशेषताहरूमा हुन सक्छ, उदाहरणको लागि, इलेक्ट्रोनिक सेन्सरको उपस्थिति, नियन्त्रण प्यानलहरू, आदि।
त्यसोभए, चल्दैन। गर्न को लागी पहिलो कुरा केतलीको तल खोलिएको छ। TEN अन्तर्गत तापमान स्विचको bimetallic प्लेटहरू । यदि तपाईंले स्टडबाट नट हटाउनुभयो र धारकहरूलाई मोडिदिनुहुन्छ, तपाइँ सम्पर्कहरू हेर्न र उनीहरूको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो मामला हटाउन आवश्यक छ भने, यो दुई स्क्रूडाइभर्सर्स लिन पर्याप्त छ: एक ले ल्याउँछ, अर्को - टीपको पर्खाल हुन्छ। यो सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, त्यसैले प्लास्टिक तत्वहरूलाई क्षति नगर्ने। यस हेरफेर पछि, तापमान स्विचको सम्पर्कमा पहुँच खोलिएको छ।
ह्यान्डलमा एक अन / अफ बटन छ। ट्रांसफर्मरहित इकाईमा जानको लागि, यो स्क्रिड्राइभरको साथ सुरक्षात्मक प्लेट पेंच गर्न आवश्यक छ। अर्को तपाईं गेट संधारित्र र दुई ड्राइव देख्न सक्नुहुन्छ, जसको मध्ये एक 220 V नेटवर्क, अर्को बोर्डमा जान्छ। आरेख्रामा ट्रांजिस्टरहरू, रिले, डायोडहरू, ज्यानर डायोडहरू, प्रतिरोधकहरू, आदिहरू छन् भनेर बुझ्नका लागि, तपाईंलाई केही ज्ञान चाहिन्छ। यहाँ, सिद्धान्त र सबै कुरामा, पोलारिस टापु ध्वस्त भएको छ।
त्यसोभए, बिजुली क्याटलल छनौट गर्न यो सजिलो छ: तपाईले कोस र डिजाइनको सामाग्री तय गर्नुपर्छ, त्यसपछि शक्ति र आवाज छान्नुहोस्। र यदि नियमको अनुसार सख्तीमा चिया काट्नको लागि आवश्यक छ भने, तपाइँ मोडेलमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यन्त्र कम्पनी Polaris चयन गर्दा यी सबै अवयवहरूलाई दिइयो, तपाईले कहिल्यै आफ्नो छनौट र पैसा खर्च गर्नुहुने छैन।
फर्नेस "विद्यार्थी": समीक्षा। ताप भट्ठी "विद्यार्थी"
पावर 8 कार्यशाला: समीक्षाहरू
सम्पर्क टाँस्नुहोस्: विवरण र आवेदन
एक निजी घरमा ग्राउण्ड फ्लो: प्रविधि र सहमति
Guanabana कहाँ बढ्छ? कसरी घर मा guanabana बढ्न
जरिवाना को गैर-भुक्तानीको लागि अधिकारको deprivation ल्याइयो कि? जरिवाना को गैर-भुक्तानीको लागि अधिकार deprivation मा नयाँ व्यवस्था
कसरी बहुलक माटो बाहिर फूल बनाउने? फूल लटकन बनाउन मा मास्टर-वर्ग।
जो बलियो छ - सिंह वा बाघ? को Titans को झडप
फिल्म "पहिलो दर्शक" Ekateriny Vasilevny Syromyatnikovoy मा एक निबंध